वाह मोटी !- प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार
वाह मोटी !
जेष्ठ १, २०७४ मधु शाही
काठमाडौं — उनलाई नजिकैबाट हेर्न चाहनेहरू धेरै थिए । तर, उनका बडिगार्डहरू तगारो बनिरहेका थिए । भारतीय कमेडियन भारती सिंह भने दर्शक हँसाउन आफ्नै शरीरमाथि व्यंग्य गर्दै थिइन्, ‘इस मोटी को देखने की इतनी जल्दी ?’ झन्डै तीन वर्षअघि कार्यक्रम लिएर नेपाल आएकी भारतीले मोटो शरीरमाथि चर्चा गर्दै मनोरञ्जन दिएकी थिइन् ।
उनले आफूले पाएको सफलतामा अभिनय क्षमतासँगै शरिरको बनावटले पनि विशेष अर्थ राखेको बताएकी थिइन् । अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले भनेकी थिइन्, ‘आफूलाई मोटी हुनुमै गर्व गर्छु ।’
समाजमा मोटो शरीर प्रगति र सुन्दरताको बाधक हो भन्नेहरूका लागि भारतीलगायत केही मोटा सुन्दरीले गलत प्रमाणित गरिदिएका छन् । थाइल्यान्डकी फेसन स्टाइलिस्ट घे गेजुन लोकभितले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘आई एम फ्याट सो ह्वाट ?’ थिमको अभियान नै चलाइरहेकी छन् । उनले ‘द फस्ट प्लस साइज स्टाइलिस्ट इन एसिया’ को टाइटलसमेत जितेकी छन् । स्टाइलिस्ट ड्रेस कसरी लगाउनेबारे उनी आफूजस्तै मोटीहरूका लागि सहयोगी बनेकी छन् ।
केही वर्षअघि यसै अभियान अन्तर्गत नेपाल आएकी लोकभितले कार्यशालासमेत गरेकी थिइन् । यति बेला ‘आई एम फ्याट सो हाट ?’ उनको फेसबुक पेज फलो गर्ने लाखौं छन् । मोटो मान्छेले कसरी फिगर फिट देखाउने भनेर सोधेको जिज्ञासामा उनी सामाजिक सञ्जालमार्फत तुरुन्तै समाधान दिने गर्छिन् । फ्री साइज महिलाले स्टाइलिस्ट फेसनको दुनियाँमा झनै प्रगति गर्न सक्छन् भन्ने उनको विश्वास छ । उनले फेसबुक स्टाटसमै लेखेकी छन्, ‘आई वाज नट बर्न टु बी एभरेज, बट टु बी एक्स्ट्रा अर्डिनरी ।’
कमिक आर्टिस्ट कृपा जोशीले ‘मिस मोटी’ थिममा सामाजिक अभियानै चलाएकी छन् । उनको विचारमा मोटी महिला असाधारण हुन्छन् । मोटोपनाले सौन्दर्य र विचारमा कुनै असर नपर्ने तर्क उनले ‘मिस मोटी’ अभियानबाट प्रस्ट्याउँदै आएकी छन् । उनले कमिक शैलीका मोटी महिला फिगर कोरेर त्यससँग मोटिभेसन हुने खालका विचार समेत फेसबुक पेजमा राख्ने गर्छिन् ।
परिवारसहित लन्डन बस्दै आएकी कृपाको मिस मोटी अवधारणा मन पराउनेहरू थुप्रै छन् । उनी समाजले मोटीलाई हेर्ने नजर परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछिन् । यसैका लागि नै उनले मिस मोटी क्रिएसन गरेकी हुन् । उनका अनुसार शरीरको बनावट हेरेर मान्छेको व्यक्तित्वमाथि टिप्पणी गर्नु गलत हो । त्यस्तै मोटो शरीर भएका व्यक्तिहरूले पनि बनावटकै कारण निराश हुन नहुने उनको सुझव छ । मिस मोटी अभियान उनको कमिक इलस्ट्रेसन मात्रै नभएर समाजप्रति गरेको तितो व्यंग्य पनि हो ।
शरीरको बनावटभन्दा काममा विश्वास गर्छिन् रंगकर्मी लुनिभा तुलाधर । स्वस्थ शरीर मोटो भए पनि करिअरमा कुनै बाधा नहुने उनको तर्क छ । कुनै समय कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘पवनकली सो’ बाट निकै चर्चा बटुलेकी उनी सुरुदेखि नै शरीर पातलो गराउने झन्झटतिर लागिनन् । अनावश्यक डाइटिङ गरेर अनुहारको ग्लो हराउँछ भन्ने उनलाई लाग्छ । मोटी भए पनि उनी नाटकमा उत्तिकै सक्रिय छिन् । हालसम्म झन्डै ४७ जिल्लामा नाटक देखाउन पुगेकी छन् उनी । धेरैले उनलाई मोटी भएकीले काम गर्न सक्नु हुन्न कि ? भनेर सहानुभूति देखाउन पनि खोज्छन् रे । उनीचाहिँ कहिल्यै मोटोपनामा आफ्नो कमजोरी देखाउँदिनन् । फेसनको नजरमा पनि शरीर सुहाउँदो पहिरन लगाउन मोटो मान्छे नै फिट हुने उनको ठम्याइ छ । ‘पहिरन मिलाएर लगाउन जाने मोटो शरीर पनि सुन्दर देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘म चाहिँ लेगिङ्ज र टप्स मन पराउँछु ।’ तर, फुर्सद भए सारी नै लगाएर हिँडदा उनी आफू सुन्दर भएको महसुस गर्छिन् ।
फेसन कोरियोग्राफर रोहिया महर्जन आफूलाई ‘फ्री साइज फिगर लेडी’ भन्न रुचाउँछिन् । यसो भनिरहँदा उनको मन कँुडिँदैन । आत्मविश्वास र मनको सुन्दरताले व्यक्तिको बाहिरी सौन्दर्य झल्काउनेमा उनी विश्वास गर्छिन् । मिस नेवा: २००५ को ट्यालेन्ट क्राउनसमेत जितेकी उनी कथक शिक्षक पनि हुन् । भारतबाट कथकमा स्नातकोत्तर गरेर आएकी उनी अरूलाई फिट राख्न जुम्बा डान्स सिकाउने गर्छिन् ।
‘क्षमतासँग शरिरको के तालमेल ?’ उनले भनिन्, ‘जीउ जति भारी भए पनि नाच्दा हल्कै हुन्छु ।’ उनको नृत्य देखेर शरीरको चर्चा नगर्ने कमै हुन्छन् । उल्टै तारिफ गर्छन् । यसैमा उनले गर्व गर्ने बताइन् । मोटी छु भन्दैमा खुकुलो कपडा लगाएर हिँड्न मन पराउँदिनन् उनी । परम्परागत र आधुनिक सबै प्रकारका स्टाइलमा सजिन सक्ने उनको खुबी छ । ‘मेरो लवाइ देखेर पातलो जीउ भएका साथीहरू सल्लाह लिन आउँछन्,’ उनी थप्छिन्, ‘मोटोपनमै राम्रो देखिन्छ भन्नेहरू थुप्रै छन् ।’
प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७४ ०८:४७
“अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट म्यानेजमेन्ट”
जेष्ठ १, २०७४ सजना बराल
काठमाडौं — स्थानीय तहको निर्वाचन हुने/नहुनेमा लामो समय दुविधा रह्यो । वरिष्ठ गायक/संगीतकार प्रेमध्वज प्रधानलाई भने तोकिएकै मितिमा निर्वाचन भइदेओस् भन्ने लागेको थियो । र, भयो पनि त्यस्तै । दुई दशकको अन्तरालपछि आइतबार शान्तिपूर्ण वातावरणमा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
८० वर्षे उनले बागबजारको पद्ममकन्या केन्द्रमा मतदान गरे ।
चुनावप्रति आस्थावान् प्रधान स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले यसपालि अझ बढी उत्साहित थिए । स्थानीय सरकार हुँदाको स्वाद चाखिसकेकाले उनका लागि यो चुनाव विशेष थियो । ‘एक किसिमको उल्लास थियो मनमा,’ भोट खसालेर आएपछि उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘वडामै सरकार हुँदा हामी नागरिकलाई धेरै सुविधा हुन्छ ।’
आइतबार बिहान खानपिन नगरीकनै प्रधान दम्पती मतदान केन्द्रमा पुगेका थिए । त्यहाँको व्यवस्था देखेर प्रधान दंग परे । पहिले–पहिले घण्टौं लाइन बसेर भोट हालेका उनी यसपालि पन्ध्र मिनेटमै काम सकेर घर फर्किए । ‘अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट म्यानेजमेन्ट,’ प्रधानले भने, ‘हामी जाँदा मान्छेहरू त्यति आएका थिएनन् । त्यसमाथि पाकाहरूलाई लाइन बस्नै नपर्ने रहेछ । सबै चीज ठिकठाक मिलाइएको पाएँ ।’
मतपत्र अलि लामो बनाएकोमा चाहिँ उनलाई चित्त बुझेनछ । पत्र जति लामो, चुनाव चिह्न उति नै सानो भएको भन्दै उनले गुनासो पोखे । आफूलाई त्यस्तो गाह्रो नभए पनि अन्य वृद्धवृद्धा अन्योलमा परेको उनले देखेछन् । ‘अप्ठ्यारो हुन्छ नि,’ उनले भने, ‘मतपत्र बनाउँदा पाका मान्छेको पनि ख्याल गर्नुपथ्र्यो ।’
वि.सं. २०१५ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पहिलो पटक भोट खसालेका थिए प्रधानले । त्यति बेला उनी आईएससी पढदै थिए, उमेरले चाहिँ २१ टेक्दै । बांगेमुढामा बस्थे । त्यहाँको स्तूपनिर बनाइएको बुथमा बुबा–आमासँग भोट हाल्न गएको अझै सम्झना छ उनलाई । राणा शासनविरुद्ध लडेको कांग्रेस त्यो बेला चर्चामा थियो । धेरै जनताले आस गरेको पार्टीलाई उनले पनि भोट दिए ।
वि.सं. २०३६ को जनमत संग्रहमा भने उनले भोट हालेनन् । मतदान केन्द्रहरू घुमिहिँडे मात्रै । प्रजातन्त्र पुन:प्राप्तिपछि २०४८ को आम निर्वाचन हुँदा उनी बांगेमुढाबाट बागबजार सरिसकेका थिए । नामावलीमा ठेगाना सारेर मतदान गरे । ठेगाना सार्न र भोट हाल्न पनि साह्रै गाह्रो भएको उनले सुनाए ।
‘प्रक्रिया झन्झटिलो थियो,’ उनले भने, ‘ठेगाना सार्ने बेला ढडडा पल्टाउनुपर्ने, एउटा कोठाबाट अर्कोमा पठाउने गरे । भोट दिन जाँदा पनि तीन घण्टा लाइनमा उभिएको थिएँ ।’ ती क्षण सम्झिँदा यसपालिको चुनाव साह्रै व्यवस्थित भएको उनले बताए । मतदान केन्द्रको संख्या बढाइदिएकोमा उनले निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद पनि दिए ।
प्रधानको पुख्र्यौली थलो भने सिन्धुपाल्चोक हो । उनलाई गाउँबाटै मतदान गर्ने रहर सधैं लागिरह्यो । चुनावका बेला एकपटक मात्रै गाउँ गएका रहेछन् उनी । वि.सं. २०३९ को पञ्चायत निर्वाचनमा उनका काकाले पनि जिल्ला सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका रहेछन् । काकालाई समर्थन गर्न उनी गाउँ गए । गायक नारायणगोपाललाई साथ लिएर सदरमुकाम चौतारा पुगेका थिए त्यति बेला । ‘भक्तपुरबाट नगरकोट हुँदै इन्द्रावती खोला तरेर हामी हिँडेरै गाउँ पुगेका थियौं,’ उनले भने, ‘नारायणगोपाल त फुच्चे नै थियो । ऊ त्यति थाकेन । म चाहिँ भसक्कै गलेको थिएँ ।’
नेता वा मन्त्रीहरूले असल काम नगर्दा मान्छेहरू भोट खेर गयो भन्दै विलाप गरिरहेका हुन्छन् । ‘घुम्तीमा नआऊ है...’ गायकलाई भने आफ्नो मत सधैं उपयोगी नै भइरहेको आभास हुन्छ । उनी हरेकपल्टको चुनावमा आशावादी भइदिन्छन् । यसपालि त झन् मुलुकको राज्य व्यवस्थाको संरचना नै फेरिएको अवस्था छ । नयाँ संरचनाले नयाँ दिशा देला भन्ने उनको कामनामा छ । ‘योग्य मान्छेले चुनाव जितून्,’ उनले भने, ‘पब्लिकलाई सुविधा होस् ।’
प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७४ ०८:४५